Cutubyo ka tirsan Ciidanka Xoogga oo Tababar loo soo xiray | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Cutubyo ka tirsan Ciidanka Xoogga oo Tababar loo soo xiray
Cutubyo ka tirsan Ciidanka Xoogga oo Tababar loo soo xiray
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed S/Gaas Cabdi Wali Jaamac Xuseen Gorod, ayaa tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan Ciidanka XDS oo tababar ku qaatay dugsiga tababarka ee Sarreeye Gaas Dhaga-badan.
Munaasabad balaaran oo lagu qabtay xarunta dugsiga tababarka, ayaa waxaa ka qeyb galay Taliyaha Ciidanka xoogga dalka, Saraakiil Ciidan, Masuuliyiin ka socday dowladdaha Italy, Swedan iyo saraakiil ka tirsan AMISOM.
Taliyaha Dugsiga tababarka ee General Dhaga-badan, Sarreeye Guuto Maxamed Maxamuud Saneey oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in ciidamadda tababarka u dhammaaday la baray la dagalaanka Shabaab, la dhaqanka bulshada iyo arrimo kale.
Madaxa Tababarka Midowga yurub, ayaa Ciidamadda xoogga dalka ku dhiira geliyay howlgalada Al-shabaab.
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed S/gaas Cabdi Wali Jaamac, ayaa waxuu munaasabadda ka sheegay in Al-shabaab ay dhibaato ku yihiin Aminga dalka, isagoo tilmaamay in Dowladda Soomaaliya dadaal adag ay ugu jirto dhismaha ciidamada Qaranka.